Ko kushandisa satellite navigator kunokanganisa kugona kwedu kwekuziva here? | Kudzidziswa Kwekuziva
Vangani veavo vari kuverenga chinyorwa ichi vanoziva chinonzi satellite navigator? Pamwe zvese kubvira, kubvira apo vafambi vemotokari vekutanga vakaitwa kuti vawanike parizvino, chero munhu akagona kuzvionera ega izvo chishandiso ichi chinobvumidza iwe kuti uite, zvakare nekuda kwekuvapo kwavo pane Smartphones (Google Mepu, semuenzaniso),
Dai taive mumusangano uye tikabvunza kuti vangani vakamboshandisa satellite vafambisi kuenda mukati kana kunze kweguta, taizoona maoko ese akasimudzwa.
Ngatitii isu tinobvunza ivo vanoshandisa kazhinji chimbo ichi, zvakare mune ino nyaya maoko akasimudzwa angave akawanda, pamwe aya evazhinji vevanhu vaivamo mukamuri.
Mufungo wakapararira, kwete chete pakati pevanyanzvi, ndeyekuti kushandiswa kwesatellite navigator "inokanganisa" uropi. Asi ndizvo chaizvo here?
Dahmani naBohbot vakaedza kuzvionesa nenzira yekuyedza uye, kunyanya, ivo vakaedza kunzwisisa kana kushandiswa kweasaf nav kunoomesesa hunyanzvi hwekudzidzira.
Kuti unzwisise kuti chii chinotsvaga, asi, chirevo.
Kana isu tikatenderedza isu uye tikapinda munzvimbo itsva isu tinowanzovimba nemhando mbiri dzechirongwa:
Spatial Strategy mnemonics. Izvo zvine chekuita nekudzidziswa kwezvikwangwani zvetauro uye nzvimbo dzadzo, nekudaro zvichibatsira mukugadzirwa kwemepu yekuziva yenzvimbo. Rudzi urwu rwehunyanzvi hwakanyatsoenderana nehippocampus, mudunhu rehuropi riri kushanda rakabatana neye episodic memory.
Stimulus-mhinduro zano. Izvo zvine chekuita nekudzidza chaiyo mota mhinduro kubva pane chaiyo chinzvimbo (semuenzaniso "tendeuka kurudyi, woenda ipapo uye pakupedzisira wotendeuka kuruboshwe"). Kugona uku kwakabatana zvakanyanya ne caudate nucleus, mweya uri pasi penzvimbo yekudzidza maitiro (semuenzaniso, cycling).
Rudzi rwechipiri rwechirongwa runotungamira kune mamwe maitiro akasimba asi anotibvumidza kufamba munzvimbo dzinozivikanwa sekunge tiri pamhepo.
Iye zvino ngatifambire mberi kunotsvaga ...
Dahmani naBohbot mukudzidza kwatinotaura vakaunganidza ruzivo rwakawanda rwunonyanya kuve runotevera.
Dhata kubva nemibvunzo tichienzanisa nehuwandu hwemaawa ekushandiswa kweiyo satellite navigator, maonero ekuenderana nekushandiswa kwayo uye kuona kwekuva nepfungwa yekutarisa.
Computerized bvunzo kuti uongorore hunyanzvi hwekuita, kudzidza nzira uye mhando yetsika maitiro yakashandiswa.
Iyi bvunzo dzose, zviyero uye mibvunzo yakapihwa kaviri, makore matatu akapatsanurwa, kucherechedza shanduko mukufamba kwenguva.
Handei izvozvi kuti tione mhinduro:
Vanhu vakashuma kushandiswa kukuru kwe satellite kuvheneka vaivewo vari mumakompiyuta bvunzo kuongororwa vakatendeukira kushoma pakashandisirwa spatial mnemonic mazano. Huwandu uhu hwakasimbiswa zvakare nekuenzanisa kuderera kwehuwandu muzvinyorwa zvemakomputa (pakati pezvakaongororwa zviviri mushure memakore matatu) kusvika kune huwandu hwekushandiswa kweiyo Navigator (nguva dzose inopfuura makore matatu). Mune mamwe mazwi, vanhu vazhinji vange vachishandisa iyo yekufamba-famba munguva yemakore matatu-kubva panguva yekutsvagisa, ivo zvakanyanya kuwedzera hunyanzvi hwekudzidzira maitiro mune bvunzo dzemakomputa..
Sezvo kushandiswa kwe satellite navigator kuri kuwedzera, kushandiswa kweiyo kukurudzira-kupindura zano kwakawedzera (zvinopesana nekushandiswa kwekuderera kwespatial mnemonic zano). Izvi zvinodaro nekuti GPS yekutsvagura inogona kunge yakafanana nekushandiswa kweiyo kukurudzira-kupindura zano kana, zvirinani, inoshanda pane zvehuropi maitiro ivo pachavo.
Akawedzera kushandisa iyo Navigation system uye kunze kwekunge yakakwanisa kugadzira mepu dzekuziva. Izvi zvinoratidza kuti kushandiswa kweGPS kunodonhedza kugona kugadzira humbowo kwezvakatipoteredza.
Avo vaishandisa GPS zvimwe vaisakwanisa kubata iwo mareferensi ekutsvaga nzira yavo
Iyo yakakwira huwandu hwemaawa ekushandiswa kweiyo navigation system yakadzora kugona kudzidza nzira itsva.
Pakazara, mhedzisiro yekutsvagurudzo iyi inoratidza kuti kushandisa nguva dzose satellite navigator kunokanganisa kugona kwedu kudzidza nzira itsva uye kutungamira isu pachedu.
Unogona here kudzidzisa ndangariro dzako?
Haukwanise kuyeuka? Incuriosisciti!
Dahmani, L., & Bohbot, VD (2020). Kugara kushandisa kweGpS kunokanganisa maspatial memory panguva yekuzvitungamira wega kufamba. Mishumo yesainzi, 10(1), 1-14.
google Maps, satellite navigator, kutarisana kwemhepo, pfungwa yekutungamirirwa
Kushandisa satanav kunokanganisa kugona kwedu kwekuziva here?2020-05-012020-05-12http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/05/utilizzare-il-navigatore-satellitare-peggiora-le-nostre-capacit-cognitive.jpg200px200px
ADHD, tarisiro inotarisirwa uye kudzikisiraADHD, Zvinyorwa, Executive Mabasa, Ndangariro, Neuropsychology
Matekiniki Ekusimudzira Kudzidza: Ndeapi Chaizvo Anobudirira? Chikamu 1Kudzidza, Ndangariro, Kudzidza Maitiro